Taxanaha Jaceylka ee ugu Fiican, dhammaantood ma aragtay? | I sii wakhti firaaqo
Xilligan taxanaha internetka ama telefishanka ayaa aasaas u ah nolosheena maalin walba. Waxaa jira noocyo badan, laakiin mid baa jira waligeed ka bixi maayo: jaceyl! Taasi waa sababta aan u soo bandhigo a xulasho gaar ah oo leh taxanaha jaceylka ugu fiican.
Jaceylku waa mawduuc guud oo la danaynayo xaqiiqda iyo khiyaaliga. Xiriirka jacaylku waa mid xiiso leh oo aan la hubin - sidoo kale waa mid aad u cakiran! Isku -darka fikradaha, dareenka iyo ficilladu waxay soo daayaan sheekooyin aan dhammaad lahayn oo leh nooc kasta oo natiijooyin ah, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu horumariyo nuxurka warshadaha madadaalada.
Ku raaxayso xulashadeena taxanaha jaceyl ee ugu wanaagsan waqtiyadii ugu dambeeyay.!
1 Galmada New York
2 Dayax gacmeed
3 Gabdhaha Gilmore
4 Waqtiga u dhexeeya seams
5 Sida aan ula kulmay hooyadaa
6 Gabdhaha fiilooyinka
8 Xulashadan taxanaha jaceylka ugu fiican ma ka buuxsantay kitsch?
Galmada New York
Waa taxane Mareykan ah oo leh qiimeyn sare oo socotay lix sano (1998 ilaa 2004) oo wadar ahaan ah lix xilli. Sheekadu waa lagu dhigay Magaalada New York. Waxaan helnaa afar haween ah oo jilayaal ah: Carrie, Miranda, Charlotte iyo Samantha.
Waxaa lagu gartaa waxay ka tarjumayaan hab -nololeedka dumarka dunida casriga ah iyo magaalo weyn: dhibaatooyinka jacaylka iyo shaqada, isku dhacyada dadka dhexdooda ah iyo diiradda weyn ee saxiibtinimada iyo walaalaynta kooxdan saaxiibbada ah ayaa ka kooban mawduucyada ugu waaweyn. Waa mid ka mid ah taxanaha jaceylka ee ugu wanaagsan halkaas!
Waxaan ka helnaa dhacdo kasta waayo -aragnimo cusub oo loogu talagalay jilayaasha ku lug leh lamaanayaashooda, shaqadooda iyo galmo badan! Taxanihu waxay jebinayaan tusaalooyin ku saabsan doorka ay haweenku ka ciyaareen mawduucii ugu dambeeyay ee la sheegay.
Guud ahaan, dhacdo kasta waxay u horseedaa milicsiga nolosha iyo xiriirka jaceylka iyo xiriirka dadka ee la socda rabitaanka dabeecad kasta.
Laga soo bilaabo taariikhda “Galmada ee New York” waxaa la sii daayay laba filim oo la sii daayay 2008 iyo 2010, waxaa jira mala -awaal ku saabsan qayb saddexaad laakiin ka -qaybgalka mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn ayaa halis ku jira.
Waxaad ka heli kartaa nuxurka dhammaan xilliyada aaladaha dijitaalka ah ee HBO iyo Amazon!
Waa a Telefishinka Mareykanka ee caadiga ah oo ay jilayaan jilaaga caanka ah ee Hollywoodka Bruce Willis iyo jilaaga Cybyll Shepperd.
Sheekadu waxay ka hadlaysaa a hay'ad dambi baaris oo ka samaysan moodel hore oo la odhan jiray Maddie Heyes iyo David Addison. Dhacdo kasta dhacdooyin taxane ah ayaa loo arkaa in la xaliyo isla marka xiriirka caadifadeed ee ka dhexeeya labaduba wuu koraa.
Waxay socotay afar sano: intii u dhaxaysay 1985 iyo 1989. Waxaad ka heli kartaa taxanaha Amazon Prime.
Waxaa curiyay Amy Sherman-Palladino, waa taxane ku lug leh jaceyl, riwaayad, iyo majaajilo. Waxay ku jileysaa hooyo kaligeed ah iyo gabadheeda oo dhowr iyo toban jir ah, kuwaasoo, iyana, la mid ah saaxiibbo isku dhow. Waxaa la qabanayey muddo toddobo sano ah iyadoo sannad walba la soo bandhigayey xilli ciyaareed.
Sheekadu waxay ka sheekaynaysaa noloshii Lorelai, oo dhashay Rory intii ay qaan -gaadhnayd wuxuuna ka soo jeedaa qoys hodan ah. Waxay ka soo horjeeddaa waalidkeed gacanta ku haya waxayna go'aansataa inay guriga ka tagto iyadoo yar si ay gabadheeda kaligeed u koriso. Dadaal badan, wuxuu ku guulaystaa inuu helo hudheel yar oo uu maamulo oo ay iska kaashadaan laba ka mid ah saaxiibbadiisa dhow.
Tixdani waxay bilaabmaysaa sannado kadib, marka ay u tagto waalidkeed si ay ugu kaalmeyso gabadha ay ayeeyada u tahay waxbarashadeeda. Qoyska ayaa dib u midoobaya oo gabdhaha Gilmore waxay ku hawlan yihiin casho toddobaadle ah guriga awooweyaashood.
Dhanka kale, Rory waa dhallinyar ku dayasho mudan: iyadu waa mas'uul, qurux badan, kalgacal badan, caqli badan waxayna leedahay saaxiibka koowaad ee ugu fiican. Xilliyada ugu horreeya oo dhan waxaan ogaannaa sida ay wax u baratay si ay ula tacaasho dhibaatooyinka dugsiga, kala duwanaanshaha bulshada iyo arrimaha jacaylka ee sii adkeynaya maalinba maalinta ka dambeysa. Waxay muujinaysaa koritaankeeda shaqsiyeed ilaa ay ka qalin jabisay kulliyadda oo ay noqotay weriye.
Labada jilaa waxay maraan lammaane jacayl oo kala duwan xilliyo kala duwan ilaa ay ka helaan jaceylkooda dhabta ah. Tixdani waxay ina siinaysaa cashar ku saabsan qiimaha qoyska, saaxiibtinimada iyo muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta xiriirada.
Sannadkii 2016, Netflix wuxuu go'aansaday inuu sii daayo taxane yar oo leh dhammaan jilayaasha soo noqonaya: "Afarta Xilli ee Gabdhaha Gilmore". Taxanaha ayaa noo cusbooneysiinaya nolosha Lorelai iyo Rory, iyo sidoo kale dadka ku xeeran.
Waxaan helnay isbaddallo waaweyn oo jilayaasha qaar ah iyo lama filaan aan la fileynin dhammaadka! Wararka ku saabsan sii socoshada ayaa hawada ...
Waqtiga u dhexeeya seams
Waa la -qabsiga sheeko -taariikheed asal ahaan Isbaanish ah, waxaa shaashadda loo keenay 2013 qaab taxane telefishan leh oo leh 17 cutub. Jilaaga caanka ah waa Sira Quiroga, oo ah haweeney ay jileyso aktarada Adriana Ugarte.
Sira, waa gabar dhar -dhaqe ah asal ahaan ka soo jeeda magaalada Madrid. Waxay ku soo kortay iyada oo ka shaqeyneysa tolidda tolidda aqoon -isweydaarsiga saaxiib aad ugu dhow hooyadeed, kaasoo ahaa kii baray farshaxanka maareynta dharka iyo cirbadaha.
Waxay ka tagtaa ninkeedii guurka u raaci lahaa Ramiro, nin dhallinyaro ah oo qurux badan oo ay hadda la kulantay oo ay jaceyl waali ah u qaaday. Waxay deggaan Tangier, Morocco waxayna bilaabaan inay ku noolaadaan maalmo riyo ay ka buuxaan raaxo, xaflado iyo waqtiyo wanaagsan.
Si lama filaan ah Ramiro ayaa ka tagta magaalada ka dib markii loo silciyey khiyaano, dambigaas oo Sira sidoo kale lagu eedeeyey, by urur. Waxay heshaa heshiis ay kaga baxdo dhibaatada waxaana lagu qasbay inay u guurto Tetouan. Isla mar ahaantaana qarxa dagaalka sokeeye ee Spain halkaas oo hooyadiis halis ku jirto.
Isagoo leh aqoonsi been ah, wuxuu magaaladaas ka sameeyay aqoon -is -weydaarsiga tolidda dharka, wuxuuna ka mid noqday meelaha ugu caansan bulshada sare. Muddadaas waxay la kulmeysaa weriye qurxoon oo ay jaceyl u qaaday oo ay ku kala tageen sababo ka baxsan awoodooda.
Muddo ka dib, waxay sameeyaan a u soo bandhig Madrid si ay u noqoto basaas dowladeed oo qarsoon. Samee aqoon isweydaarsi tolidda si aad u soo jiidato dabaqadda sare. Wuxuu qaraabo la yahay saraakiil sare oo Jarmal ah wuxuuna koorsada kula kulmayaa jacaylkiisii ​​hore kaas oo leh sir badan si uu u qariyo.
Nuxurka waxaa ka buuxa jaceyl iyo sir. Waxaa laga heli karaa Netflix.
Waa sheeko aadan ka maqnaan karin!
Sida aan ula kulmay hooyadaa
Taxanaha Waqooyiga Ameerika oo leh 9 xilli oo la sii daayay 2005 ilaa 2014. Qorshuhu wuxuu sheegayaa sheekada sida Ted Mosby ula kulmay xaaskiisa iyo hooyada carruurtiisa.
Taariikhdu waa waxaa ka sheekeeyay jilaaga ku nool New York oo u sharxaya carruurtiisa sida uu ku helay jaceyl dhab ah yaraantiisii. Dhacdo kasta waa riwaayad, tacabur iyo jaceyl.
Ted wuxuu leeyahay koox saaxiibo fiican ah: Marshall, Lilly, Robin iyo Barney. Waxay u sheegaan sheekooyinkooda inta taxanaha lagu jiro si ay u noqoto mid xiiso badan. Dhibaatooyinka caadiga ah ee xiriirka jacaylka iyo saaxiibtinimada ayaa ka muuqda dhalinyarada.
Waa taxanihii ugu horreeyay ee Isbaanish ah oo ka kooban cinwaan Netflix gaar ah. Waxay ku bilaabatay si guul weyn leh 2017 iyo laba xilli ayaa la sii daayay isla sanadkaas. Horudhaca sii wadistu wuxuu bilaabmayaa Sebtember 7, 2018. Jilaayaashiisu waa aktarada Isbaanishka Blanca Suarez.
Riwaayadda jaceylka waa waxaa la aasaasay 20 -kii waxayna sheegaysaa sheekada afar haween ah oo ka shaqeeya shirkadda isgaarsiinta ee ugu weyn Madrid qabashada hawsha hawl wadeenada taleefanka.
Lidia waa dabeecadda ugu weyn Waxay xambaarsan tahay siro badan oo hore oo ku jira boorsooyinkeeda waxayna si lama filaan ah ula kulantay jaceylkeeda qaangaarka ah shirkadda ay hadda ka shaqeyso, dhanka kale milkiilaha shirkaddu wuxuu ku faraxsan yahay quruxdeeda iyo caqligeeda. A saddex -xagalka jacaylka oo ay ka buuxaan khilaafyo iyo daqiiqado xamaasad leh.
Dhinaca kale waxaan leenahay Ángeles, Carlota iyo Marga oo xiriir saaxiibtinimo oo aad u xooggan la leh Lidia. Mid kasta oo iyaga ka mid ahi waxay leedahay shakhsiyad iyo hab -nololeed aad u kala duwan. IYOWaxaan ka helnaa waxoogaa muran ah oo ku jira qorshaha maadaama ay ku lug leedahay arrimo jebiyey tusaalooyinkii waqtigaas, sida kiiska khaniisnimada iyo furiinka.
Sheekadani waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay liiska taxanaha jaceylka ugu fiican!
Netflix waxsoosaarkii asalka ahaa ee la bilaabay 2016 oo ilaa hadda laga heli karo laba xilli madal.
Waa a taariikhda guud ee lammaanaha oo ay fududahay in la aqoonsado. Waxay leeyihiin kiimiko aad u fiican oo inkasta oo aysan ahayn lammaanaha ugu fiican ee ay bulshadu qeexday, waxaan helnaa horumar xiiso leh oo u dhexeeya lammaanaha ka kooban Mickey iyo Gus.
Tixdani waxay siinaysaa casharro nolosha lammaane ahaan ah oo ku saabsan muhiimada shaqsi ahaaneed iyo isku -dheelitirnaanta, iyo sidoo kale baahida loo qabo dheelitirka u dhexeeya galmada iyo jacaylka. Jilaahu wuxuu leeyahay qaabab badan waxaadna jeclaan doontaa inaad aragto sida lammaanuhu u xalliyaan dhibaatooyinkooda siyaabo kala duwan oo ay u soo bandhigaan aragtiyo kala duwan oo ka mid ah kooxda asxaabta ee ku xeeran.
Xulashadan taxanaha jaceylka ugu fiican ma ka buuxsantay kitsch?
Ka digtoonow, ma jirto sabab lagu naxo! Mid ka mid ah cinwaannada la soo bandhigay malab saafi ah, xulashada waxay ku salaysan tahay jacayl isku jira oo leh arrimo kale: waxaan leenahay majaajilo, riwaayad, ficil, mood, qarsoodi, basaasnimo iyo waxyaabo kale taasi waxay kaa dhigi doontaa inaad ku raaxaysato taxane kasta mid aad u badan.
Taxanaha jaceylka ayaa matalaya daweynta maaddaama ay u fududahay dheefshiidka, si aad u nasato intaad baraneyso wax ama labo cusub oo ku saabsan jacaylka iyo nolosha guud ahaan. Haddii kuwaagu yihiin nooca jaceylka, waa inaad aragtaa dhammaan taxanaha lagu taliyay qoraalkan!
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Taxanaha jaceylka ugu fiican